Saxaafadda Kenya oo wax ka qortay arrin murugo leh oo Muqdisho ka socota!! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Saxaafadda Kenya oo wax ka qortay arrin murugo leh oo Muqdisho ka...
Saxaafadda Kenya oo wax ka qortay arrin murugo leh oo Muqdisho ka socota!!
(Muqdisho) 18 Abriil 2020 – Bartamihii bishii Maarso, Golaha Wasiirrada ayaa shir deg deg ahaa oo uu shir guddoominayo RW Xasan C Khayrre ku qabtay magaalada Muqdisho si looga arrinsado caabuq-sidaha Covid-19 oo lasii saadaalin karey inuu dalka kusoo fool leeyahay, sida uu qoray The Nation.
Waxaa markiiba war kasoo baxay Hay’adda Duuliska Rayidka ah ee Somalia lagu sheegay in la hakinayo duullimaadyada caalamiga ah, sidoo kale Wasiiradda Caafimaadka, Dr Fawsiya Abiikar Nuur, ayaa u qalab qaadatay inay dadka usoo bandhigto tillaabooyin iyo hab-raacyo cudurka looga gaashaamanayo.
17-kii Maarso, RW Khayrre ayaa markale ku dhawaaqay in la xirayo “dhamaanba macaahidda waxbarashada muddo 15 maalmood ah.” Amarkaasoo dabcan lasii dheereeyey.
Yeelkeede, markii ay ardaydu maqleen in la xirey goobihii waxbarashada, waxay qaar badani u fahmeen in loo fasaxay howlihii dhallinyaranimada oo dhan.
Dhaqsaba waxaa buuxsamey goob kasta oo ay bulshadu iskugu timaado, waxay dhallinyaro badani bilaabeen inay kubbad isku ballansadaan, xitaa qaar baa jidadka ku ciyaaraya. Makhaayadihii iyo maqaaxiyihii ayaa buux dhaafay.
Sheekh Cabdi Xayi, oo Imaam ka ah Masjidka Cumar bin Khaddaab oo ka mid ah dadka ugu caansan wadaadada magaalada ayaa is waydiiyey faa’iidada ku jirta in iskuulladii la xiro haddiiba aanu jirin kala durug bulsho oo hirgalay oo garabka la isku jiidayo?
Maama Siraad Qaasim, oo ah hooyo 5 carruur ah leh oo Muqdisho ku nool ayaa sheegtay inaysan wiilasheeda guriga ku hayn karin.
“Fiiri, wiilashu waa sidii shimbiro, ama waxaad ku mashquulinaysaa iskuullo ama waxaad u fasaxaysaa inay aadaan meeshii ay rabaan,” ayay tiri.
Waxaa buuxa masaajiddii oo shanta waqti lagu dukanayaa, suuqyadii ayaa sidii loo buuxaa iyadoo aanu jirin wax kala sikasho ah oo u dhexeeya ganacsatada dhexdooda iyo ganacsatada iyo macaamiisha.
Basaskii magaalada ay u kala gooshayey 17-ka degmo ee magaalada ayaa walwaala xamuul xitaa ka badan qaadkooda. Basaska qaar oo 30 qof qaad ah ayaa la arkayaa iyagoo sida dad istaag ah, taasoo dhalinaysa in la isku neefsado.
Hal tillaabo oo Muqdisho si wanaagsan uga hirgashay waa bandawga habeenkii oo dhaqan gala 8:00 PM, socdana ilaa 5:00 AM, kaasoo bilowday Abriil 15 isla markaana ay dadku aad u adeeceen, ayuu warkiisa kusoo afjaray The Nation.
Previous articleRASMI: DF Somalia oo lacag ”CAYR” ah u bilaabaysa dadka danyarta ah + Sawirro
Next articleSucuudiga oo ku tala jira in Taraawiixda iyo xitaa Ciidda Soonfur guryaha lagu oogo haddii…